I-MED: UKUTYHALA KUZA KUVAVANYA UKUKHANGELWA KWEALBHAMU - IINDABA
Ukutyhala kuza kuTyhila
I-emcee inemveliso evela eMadlib, O Hayi, J Dilla, kunye neBlaze nje kule Stones Throw release.
UGil scott heron ubusika eMelika
Ngokuhamba okumnandi kunye nokunqongophala kokungabikho kwelizwi, i-MED ayinakunceda kodwa ithathe isihlalo esingasemva esingenakuphikiswa kwimveliso ye-albhamu yakhe ethandekayo, eza ngoncedo lukaMadlib, Oh Hayi, J Dilla, kunye ne-mega-watt stunner Just Blaze, ukukhanya kwenyanga I-dayjob yakhe eyaziwayo edume ngobushushu kwihlabathi ukuba ajule ilitye lakhe. Ukuphatha i-10 ye-albhamu ye-15 beats, i-Madlib ehamba phambili ithatha ubukumkani kwaye iphosa umjelo ozinzileyo (ngokukhanyayo) weentloko zebhokhwe zomphefumlo ezicace gca ezibonelela ngokwamkelwa kwezinye i-esoteric, hit-or-miss avant-personas. Okwangoku, i-California MC ngokungazi izikhubekisa ngelixa izama ukudibanisa ubunzima be-Kweli-esque yamagama kunye nokuziqhayisa okunesifuba kodwa ayinabo ubulumko okanye i-swagger yokukhupha ngokuqinisekileyo.
'Uyintoni Kuyo?' isebenza njenge microcosm yokusilela kwidiski. Umzalwana kaMadlib Oo hayi ukubetha kwe-pop-lock kubonelela ngentloko ngendlela ye-synth bass edlala kwisiphelo esiphakamileyo segitare kunye ne-alarm alarm yedijithali, kodwa i-MED izama ukufaka iisilabhili ezininzi kwiivesi, irhuqa phantsi isingqisho esivumelanisiweyo. Ayisiyongxaki ukuba elona candelo lishushu lomkhondo sisisixhobo somzuzu esinexesha elide. Ukulahleka ngokucacileyo xa kufikwa kumagwegwe (ezona zirekhodi zigqwesileyo kugqitywe kwi-MED-ngaphantsi), umlobi uphendula umbuzo wesitrato ngombuzo osisiqhwala onemigca yokulala ngathi, 'Ukubetha kunye nezicengcelezo, izitrato kunye nokuguba, ndiyangxama imigodi. '
I-MED iphantse yafanisa umculo wayo ophakamileyo amaxesha ngamaxesha. Umculi uNoelle uphinde abuyele 'kwi-Special' yasekuqaleni u-Erykah Badu-isampulu yokulinganisa kunye nelizwi lakhe elinenqwelomoya longeza ukukhanya okuthelekisayo nokuthelekiswa kweengoma ezixineneyo zeqabane lakhe. 'Kufuneka siyenze ibe nkulu okanye siyifase nje kancinci ukuze siqhushumbe,' utshilo u-theorizes, ejija izimvo zangaphantsi nangaphantsi komhlaba njengee-piano chords eziqhuba ingoma ngelixa kubulawa ii-chimes kunye nokuthomalalisa ii-hums zihamba ubude bokuxhasa igama likaMadlib lokuvuna kwangoko. Izandi zokubethwa kwee-bongs kunye neetoksi zokukhohlela azinakonakalisa 'Ungaze unikezele', i-ode ethwele uphondo ethwala intsangu. (Ewe, uMadlib usemva kwale.) Isampulu ye-ba-do-be scat isampulu ivelisa eyona Push iphakamileyo yendalo, umhobe wokuziva ulungile kwii-hash-hound kwihlabathi liphela.
ithamsanqa unyana creedance ukuvuselelwa kwamanzi acocekileyo
Ukuhamba okulungele ukuthengisa kuyathakazelisa kuthathelwa ingqalelo indawo ekhethekileyo yeStones Throw kwindawo ye-hip-hop, kodwa ekugqibeleni iyadanisa. Ukudibana nje kweBlaze 'ukubuyela umva' kukuziqhelanisa ne-svelte yokuzivocavoca kwi-minimalism, ngentambo ezothusayo kunye ne-funky bongos ngobuqili ekonyusa i-bump. Kodwa umlimi uyayigquma iMC yakhe, ude abhekiswe ngokungathandekiyo kwingoma yomculo ('Blaze nje uphi?').
Kwi-albhamu enokuthi isebenzise ngokungathandekiyo ngakumbi ukutyeba kweendwendwe ezilula ngenxa yohlobo olulula, Ukutyhala ubukhulu becala akukho moya ucocekileyo. Kodwa luhlanga olubizwa ngokuba yi-Quest kunye ne-Fugees umvelisi kunye nexeshana lokudlala i-MC Diamond D kwindinyana edlalwayo 'yoxinzelelo' ebonisa amandla kaPush asilelayo. I-vet ye-hip-hop ikhula imigca ye-semi-corny efana, 'Kwaye ndingu-grindin' ukuze ungandiboni rhoqo / Ndizama 'ukwenza izigidi ezi-6 njengoStevie Austin,' kodwa, ngokungafaniyo neMED, ukuthanda kwakhe, Isitayile esingakhathaliyo sithengisa imigca kwaye, kwimizuzwana embalwa, ufumana umbono wento le albhamu izele yiminqwazi engaqhelekanga enokuvakala ngathi ijongiswe nguMC onokubenza ubulungisa.
tyler umdali intyatyambo yenkwenkwe yoluhlu
steely dan akanakuthenga imincili
Kurt ubomi obunje ngoluhlobo
Ihlokondiba elinzulu linyikimisile